Koogeek: अमेजन | मा तपाइँको घर र स्वास्थ्य उत्पादनहरु मा छुट ग्याजेट समाचार
यदि त्यहाँ कुनै ब्रान्ड छ जुन क्षेत्रको बाहिर खडा छ स्मार्ट घर र स्वास्थ्य उत्पादनहरू, Koogeek हो। हामी तपाइँको पक्ष मा उत्पादन को एक विस्तृत श्रृंखला को लागी। त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका उपभोक्ता आवश्यकताहरूमा फिट हुन्छन्। थप रूपमा, ब्रान्डका धेरै उत्पादनहरू पहिले नै छन् वेबमा चिनिन्छन्.
यस अवस्थामा हामी एक श्रृंखला भेट्छौं अमेजनमा बिक्रीको लागि Koogeek घर वा स्वास्थ्य उत्पादनहरू। यो अस्थायी प्रस्ताव हो, जसको साथ तपाईं यी उपकरणहरूमा एक राम्रो छुट पाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई तल तल भन्दछौं:
1 Koogeek स्मार्ट Wi-Fi प्लग
3 Koogeek डिजिटल इलेक्ट्रोसिमुलेटर
4 Koogeek डिजिटल इयर र निधार थर्मामीटर
5 dodocool 10000mAh पोर्टेबल बाह्य ब्याट्री
6 dodocool हब USB सी
Koogeek स्मार्ट Wi-Fi प्लग
यो प्लग ब्रान्डको सबै भन्दा राम्रो चिनिएका उत्पादनहरू मध्ये एक हो। यसलाई धन्यवाद, तपाईं सक्नुहुन्छ रिमोटली कुनै पनि उपकरण नियन्त्रण गर्नुहोस् जुन हामी यसलाई कनेक्ट गर्दछौं। त्यसोभए एन्ड्रोइड र आईओएस संग मिल्ने एक अनुप्रयोग को माध्यम बाट, तपाई सकिएको उपकरणलाई सजिलो आरामदायक तरीकाले बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। यसले हामीलाई प्रदान गर्ने फाइदाहरू मध्ये एक यो एप्पलको एलेक्सा, गुगल सहायक र होमकिटसँग उपयुक्त छ।
यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ यसलाई कन्फिगर गर्नुहोस्, तपाइँ सक्नुहुन्छ प्लगिन खोल्न वा बन्द गर्न एक सहायक प्रयोग गर्नुहोस् आवाज आदेशको साथ। केहि परिस्थितिमा यसलाई अधिक आरामदायक र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईं घरमै हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न तपाईं अर्को कोठामा हुनुहुन्छ भने। तपाईं पनि सक्षम गर्न सक्नुहुनेछ जब यो सक्षम हुन्छ वा बन्द हुन्छ।
यो Koogeek प्लग अवस्थित छ .१.26,99 युरोको मूल्यमा उपलब्ध छ बिक्रीमा। छुट प्राप्त गर्नका लागि तपाईले यो छुट कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ: S8W5ENHL जुन फेब्रुअरी,, २०१ 8 सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। 2019० एकाइहरूमा सीमित प्रस्ताव।
दोस्रो हामी फेला पार्दछौं यो नाडी रक्तचाप मोनिटर, जो एक डिजिटल प्रदर्शन संग आउँछ। यो मापन परिणाम स्पष्ट देख्न सकिन्छ को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी धेरै सजिलो बनाउँदछ। थप रूपमा, यो ठूलो स्क्रिन हो, जसले सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि आदर्श बनाउँदछ। यस ब्रान्डको रक्तचाप मोनिटर एक अनुप्रयोग मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जुन एन्ड्रोइड र आईओएसमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
यो अनुप्रयोगले हामीलाई मापन ईतिहास र परिणामहरूको सँधै ट्र्याक राख्न पनि अनुमति दिनेछ। ठूलो महत्वको केहि यदि तपाईं स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिको विकासको अनुसरण गर्न चाहनुहुन्छ भने। यसैले, यी डाटा सँधै उपलब्ध र पहुँचयोग्य हुन्छन्। अमेजन हामीलाई यो Koogeek रक्तचाप मोनिटर छोड्छ १ 15,99 युरो मात्र.
पदोन्नतिमा रुचि राख्नेहरूको लागि, यो एक छुट कोड प्रयोग गर्न आवश्यक छ, जुन यो हो: UZ7VFLY6 स्टोरमा फेब्रुअरी until सम्म उपलब्ध। प्रस्ताव units० एकाइमा सीमित।
Koogeek डिजिटल इलेक्ट्रोसिमुलेटर
अर्को उत्पादन जुन ब्रान्डले हामीलाई छोड्दछ यो हो EMS मालिजर (इलेक्ट्रिकल स्नायु उत्तेजना), जुन हामी शरीरमा एउटा क्षेत्र मालिश गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं, या त आराम गर्न वा यदि हामीलाई मांसपेशिको समस्या छ। यसले हामीलाई विभिन्न अवस्थाहरूमा काम गर्न सक्दछ, थप रूपमा, यसलाई सबै प्रकारका अवस्थाहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चाहे तपाईं सोफामा बसिरहनु भएको छ वा केहि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो ढाँचाका लागि धन्यवाद जुन ठूलो छैन र प्रयोगकर्ताको शरीरसँग राम्रोसँग फिट छ।
अनुमति दिन्छ सजीलै तीव्रता र गति समायोजित गर्नुहोस् प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई। चाहे तपाई अझ आरामदायी वा कम गहन मालिशको खोजीमा हुनुहुन्छ, वा जसमा तीव्रता बढी छ। यी सबै एक अनुप्रयोगका लागि समायोज्य धन्यवाद हो जुन Koogeek ले प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउँदछ। त्यसैले यो प्रत्येक व्यक्तिगत स्थितिमा सबै समयमा समायोजित हुनेछ। साथै, अनुप्रयोग प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ।
हामी उनलाई एमा भेट्छौं यस पदोन्नतीमा १। .19,99eयुरो अमेजनमा। यो विशेष मूल्यमा प्राप्त गर्नका लागि, फेब्रुअरी until सम्म उपलब्ध, यो छुट कोड प्रयोग गर्न आवश्यक छ: TBXC8LFT। प्रस्ताव units० एकाइमा सीमित।
Koogeek डिजिटल इयर र निधार थर्मामीटर
ब्रान्डको क्याटलगमा अर्को प्रख्यात उत्पादन यो डिजिटल थर्मामीटर हो, जुन यसको सानो सानो ढाँचाको लागि बाहिर खडा हुन्छ, जुन हामीसँग सँधै हामीलाई बोक्न योग्य हुन्छ। यो दुबै अगाडि र कानमा लगाउन सकिन्छ, प्रयोगकर्तालाई प्रत्येक परिस्थितिमा सबैभन्दा सहज विकल्प छनौट गर्न अनुमति दिँदै। ब्लुटुथको उपस्थितिको लागि धन्यवाद, स्मार्टफोनमा एक अनुप्रयोगको साथ सिंक्रनाइज़ गर्न सकिन्छ। यसमा सबै मापन को रेकर्ड छ।
यदि व्यक्ति बिरामी छ भने यो एकदम प्रयोगको हुन सक्छ किनकि यसले विकासको ट्र्याक राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, ब्राण्डबाट यस थर्मामिटर यसको अपरेशनको गतिलाई देखाउँदछ। केवल एक सेकेन्डमा यसले शरीरको तापक्रम दिन्छ, अन्य मोडेलहरूको तुलनामा उच्च शुद्धताका साथ। प्रतीक्षा गर्न को लागी आदर्श छैन।
हामी यसलाई फेला पार्दछौं यो पदोन्नती अमेजन मा १..18,99 युरो को छ। यो विशेष मूल्यमा फेब्रुअरी until सम्म प्राप्त गर्न सम्भव छ, जसको लागि तपाईंले यस छुट कोड: PNW8DANI प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव units० एकाइमा सीमित।
dodocool 10000mAh पोर्टेबल बाह्य ब्याट्री
Koogeek उत्पादनहरु को अतिरिक्त, dodocool उत्पादनहरु को एक जोडी को लागी हाम्रो सूची मा प्रतिक्षा गरीरहेको छ। ती मध्ये पहिलो यो बाह्य ब्याट्री हो, जुन १०,००० mAh को क्षमता छ। एक उत्तम विकल्प आवश्यकताको कुनै पनि समयमा एक वा बढी स्मार्टफोन चार्ज गर्न सक्षम हुन। के यसको बारे बाहिर खडा छ कि यो पोर्ट को धेरै प्रकारहरु छ, जो यो कुनै पनि फोन संग उपयुक्त बनाउँछ। किनभने त्यहाँ माइक्रोयूएसबी, यूएसबी-सी पोर्ट र दुई अन्य USB आउटपुटहरू छन्।
यसले निश्चित रूपमा प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै सुविधा प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो फोन र अरु कसैको साधारण तरीकाले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एक छ प्रदर्शन, बाँकी उर्जाको प्रतिशत देखाउँदै, जसले तपाईंलाई सँधै यसको राम्रो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। एक आवश्यक सहायक
अमेजन मा यस पदोन्नति मा खरीद गर्न सकिन्छ e०० यूरो को मूल्य मा। यो मूल्यमा प्राप्त गर्नका लागि, फेब्रुअरी until सम्म उपलब्ध, तपाईले यो छुट कोड: FFRNWFXJ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव units० एकाइमा सीमित।
अन्तमा हामी यो USB हब फेला पार्छौं, जसमा हामीसँग सातवटा बन्दरगाह छन्, जसले तपाईंलाई यससँग सबै प्रकारका उपकरणहरू धेरै सरल तरीकाले जडान गर्न अनुमति दिनेछ। आदर्श यदि केही समयमा तपाइँको ल्यापटप वा डेस्कटपमा पर्याप्त पोर्टहरू छैन, र तपाइँले यो विकल्पको सहारा लिनु पर्छ। यसले तपाईंलाई अधिक साधारण तरीकाले थप उपकरणहरू जडान गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, त्यहाँ सबै प्रकारका पोर्टहरू छन्, जसले यसलाई अधिक बहुमुखी बनाउँछ।
यसले प्रस्तुत गर्ने अर्को ठूलो फाइदाहरू यसको सानो आकार हो, जसले धेरै कम डेस्कटप स्पेस लिन्छ। त्यसोभए जब तपाईलाई यसको प्रयोग गर्दा वा यसलाई बचत गर्दा समस्या हुने छैन। यो यस पदोन्नतिमा अमेजनमा २। .29,99eयुरोमा उपलब्ध छ। यो विशेष मूल्यमा फेब्रुअरी until सम्म खरीद गर्न सकिन्छ, यो छुट कोड प्रयोग गरेर: OI8JF। प्रस्ताव units० एकाइमा सीमित।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » घर » अमेजनमा बिक्रीको लागि कुजीकको सर्वश्रेष्ठ घर र स्वास्थ्य उत्पादहरू